Ama-Proteas afuna ukumvalelisa kahle u-Morkel
Standard Bank Proteas bowler Morne Morkel
Ama-Standard Bank Proteas agqugquzelwe ukumvalilisa kahle u-Morne Morkel kumdlalo wesine we-Sunfoil Test bedlala ne-Australia ezoqala e-Bidvest Wanderers Stadium ngoLwesihlanu. Lomdlali oneminyaka engu-33 wamemezela ukuthi uzothatha umhlalaphansi emuva kwale-series, evala umsebenzi wakhe weminyaka engu-12 edlalela i-South Africa.
Umsebenzi ka-Morkel owaba i-career-best (9/110) kumdlalo we-Test wesithathu kubhalwe kahle kwi-series yokuvalelisa, kanye nesifiso nenkani kulingana nomsebenzi wakhe kuzovela okokugcina e-‘Bullring’.
Umdlalo uphinde obaluleke kwi-South Africa, ukunqoba kuzobanqobisa i-series ezobaqophisa umlando bedlala ne-Australia ekhaya, okokuqala seloku kwahlanganwa. u-Faf du Plessis ufuna ukugxila kuphindele kwikhilikithi, futhi usegcizelele ukuthi abalandeli baphume ngobuningi babo bezosekela umdlalo wokugcina we-season.
“Le-series iqedana amandla ngenxa yezinto zangaphandle kwenkundla yokudlala kodwa singathanda ukuyivala kahle i-series,” ekhuluma nezintatheli ngaphambi komdlalo. “Kuzoba umdlalo ka-Morne wokugcina njenge-Protea futhi ngithemba ukuthi thina njengeqembu, nabalandeli be-South Africa, singamuvalelisa kahle. Siphinde sibe encupheni yokuqopha umlando, kuningi okudlalelwayo, ngithemba ukuthi wonke umuntu uzophuma futhi asekele iqembu.”
Ukapteni uncome isimilo kanye nokulwa kwabadlali bakhe kwi-series, ukuhlangana futhi kwagqanyiswa abanye abadlale kahle ngokushaya kanye nokuphosa. Uthi umsebenzi usekude ukuphela nokho bengaphambili ngo-2-1, kodwa ufuna abadlali bakhe badlale ngamandla kanye nokufuna ukuqeda i-series.
“Abaqhudelananyo benza njalo, bafuna ukungena benze isiqiniseko sokuthi bayawuqeda umsebenzi,” esho. “Ngikhipha imicabango yami ngokuthi ngizizwa kanjani ngomunye umuntu futhi yena (u-Steve Smith) adlula kukho, kodwa angeke kuphazamise lokhu esifuna ukukuzuza ezinsukwini ezinhlanu ezilandelayo. Sizodlala uhlobo olufanayo lwekhilikithi. Bekukuhle ukubona lokho kule-series, ukuthi abadlali abathile badlale indima ngezikhathi ezihlukene.”
“Ngikhulumile ngokufuna kwabadlali emuva kwe-Test yokuqala,” esho eqhubeka. “Ukuthi bagqugquzeleke ukuthi bazame futhi baguqule iqembu le-Australia. Yingakho sithole ukunqoba, asisuswanga yilutho futhi singaphambili ngo-2-1 kwi-series.”
Amathikithi omdlalo ayafunwa, futhi abalandeli bagqugquzelwe ukuthi bathole amathikithi encishiswe ngo-50% kwimindeni kumdlalo. Amathikithi angathengwa e-Gauteng Cricket Board Ticket Office noma ku-www.ticketpros.co.za.
Ubuhlakane bukaMorne kuhola ukunqoba okukhulu kwama-Proteas nokuba u-Morkel ufinyelela ku-300; uhlelela ama-Proteas ukuba ngaphambili i-CSA ihalalisela u-Morne Morkel ngokungena kwiqembu lo-300 u-Cummins uguqula izinto emuva kwekhulu lika-Elgar elinike Ukubuya kwa-Rabada ‘ukuphakamisa’ okukhulu kuma-Proteas – u-Gibson i-CSA yamukela uphumela wesicelo i-CSA iyaqhela kumamaski zika-SBW; iyaxolisa kwi-CA u-Rabada uwaqalisa kahle ama-Proteas nge-‘fifer’ yakhe yesishagalombili u-Du Plessis ufuna kukhulume ikhilikithi i-CSA imemezela iqembu lama-Proteas lamankontileka ka-2018/19 u-Faf udumele kodwa uyaziqhenya ekulweni kweqembu